Daawo Xasan Daahir Aweys: “CC Warsame wuxuu ku dhacay kufrinimo cad” – Hornafrik Media Network
Daawo Xasan Daahir Aweys: “CC Warsame wuxuu ku dhacay kufrinimo cad”
By Liibaan Nuur	 On Dec 4, 2019
Sheekh Xasan Daahir Aweys oo toos bulshada ugala hadlayey bartiisa Facebook-ga ayaa ka hadlay arin mudooyinkii dambe ay isku hayeen qaar ka mid ah culumada Soomaaliyeed iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Muuqaalka uu ka soo muuqday Xasan Daahir oo soconaya ku dhawaad 50 daqiiqo, ayuu ku sheegay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu u leeyahay aqoon dheer, waxa uu ku kacayna aysan aheyn xad gudub oo kaliya, balse uu ku dhacay ‘fal kufri ah’.
Isagoo sii hadlayey ayuu yiri, “Midda ka sii daran waxay tahay inuu kor u qaaday gaaladii, haweenkoodii iyo manhajkoodii, isagoo dumiyey kii Nabigeenna NNKH waxuuna ku doonayaa cizo, igadaa culumadaan wax iska dhah-dhahaya, balse waxaan idiin sheegaa qofka ku kaca falkaas intaan aakhiro la gaarin iyuu aduunyada ku khasaaraa”.
Xasan Daahir ayaa Cabdiraxmaan C/Shakuur ku tilmaamay nin agtiisa ay wax walba beec ka yihiin, “Wadanku waa beec, diintu waa beec, dadku waa beec, saas oo ay tahayna dad u sacbinaaya ayaan arkaayey waana khasaarsanyihiin kuwaas, sababtuna waxay tahay waxa uu ninkaas ku jees-jeesayo inuu xadiiska Rasuulka yahay wey ogyihiin, isagaana la mid tihiine ogaada” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Xasan ayaa sheegay in Cabdiraxmaan waxyaabaha nuucaas ah waligiis laga sheegi jiray, balse uu maanta ku dhiiraday inuu fagaaraha la soo istaago, isagoo sheegay hadii uusan ka toobad keenin inuu waligiis ku sejalnaa doono.
Halkaan ka Daawo hadalkiisa oo dhamays tiran:
Akhriso: Nuxurka hadalladii ay maanta xildhibaanada isku dhaafsadeen ka doodistii sharciga doorashooyinka